Kushaqwe utshwala obebudayiswa isinyenyela eDundee - Ilanga News
Home Izindaba Kushaqwe utshwala obebudayiswa isinyenyela eDundee
Kushaqwe utshwala obebudayiswa isinyenyela eDundee
Kusolwa amaphoyisa endawo ngokunyathela lolu daba
AMAPHOYISA akwezinye izindawo atheleke kwancane indawo eDundee izolo ngeSonto ashaqa bonke utshwala obebudayiswa isinyenyela.
KUGASELWE sekuhanjwa nanamaphoyisa aqhamuka kwezinye izindawo, kwashaqwa utshwala okuthiwa bebudayiswa isinyenyela, eDundee njengoba kukhishwe umyalelo wokuba kuvalwe zonke izindawo ezidayisa izinyembezi zikaFaro njengoba kugonqwe izinsuku eziwu-21 ukunqanda ukusabalala kweCovid-19.
Lokhu kwenzeke izolo ngeSonto eDundee. UNgqongqoshe wezoku-Thuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, utheleke namaphoyisa akwezinye izindawo kule ndawo ebisadayisa utshwala emuva kokuba kuzwakale izindaba zokuthi amaphoyisa aseNdumeni ayalwazi lolu daba kodwa kawazithathi izinyathelo.
Kunezinsolo eziqinile zokuthi amaphoyisa aseNdumeni anobudlelwano obuqinile nomnikazi wale ndawo ethengisa utshwala. Ngokuthola kweLANGA, lesi sigameko sibikwe ngusihlalo wekomidi lezemfundo oyilungu lesishayamthetho KwaZulu-Natal, uMnu Jomo Sibiya, esiteshini samaphoyisa okwenze afika esephethe bonke ubufakazi bokuthi kule ndawo kuyachanaswa, kakuvaliwe.
UMnu Sibiya uthi ukudayiswa kotshwala kule ndawo yaseTaye Side, eDundee, bekufihleke kakhulu ngoba abantu bebefika sengathi bazosebenzisa ikhompyutha (internet cafe), kanti bukhishwa ngemuva utshwala.
Uthi abanye bebefika nezikhwama bezobulanda. Utshele leli phephandaba ukuthi okwenze walusukumela phezulu lolu daba wukuthi nguyena ogadiswe le ndawo yi-ANC.
“Ngize ngazifikela mathupha ngabatshela ukuthi le nto abayenzayo kayemukelekile ngoba babulala isizwe sakithi. Kabazange bangilalele, bathe mangihambe ngiyofa yini, engizoyenza,” kusho uMnu Sibiya.
Uthi okuqaphelekile wukuthi umnikazi wesitolo unolwazi lonke ngokusebenza kwamaphoyisa ngoba ubehlola isimo ngaphakathi esiteshini samaphoyisa, bese efonela kwakhe ukuthi makudayiswe.
Uveze nokuthi lolu daba akagcinanga ngokulubika esifundazweni, kodwa ulwedlulisele ngisho kuzwelonke kuNgqongqoshe wezamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele.
Kuthathwe nemishini yemali kusona lesi sitolo kuyophenywa ukuthi ukudayisa utshwala kuqale nini emuva kwesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokuthi makuvalwe yonke into.
UNkk Dube-Ncube uthe bashaqekile ukuthi kungaba khona abantu abenza into efana nalena ekubeni izwe lisenkingeni.
“Sizoqinisekisa ukuthi amaphoyisa ayawenza umsebenzi wawo ngendlela efanele. Ngicela imeya yaseNdumeni namaphoyisa akule ndawo ukuba abambisane nomengameli wezwe njengoba kulwiwa nobhubhane lwalesi sifo.
“Makungavunyelwa abantu abenza lokhu ekubeni isimo sinzima kangaka,” kusho uNkk Dube-Ncube.
Uhambele nezitolo zakule ndawo ehlola intengo yokudla njengoba kunezinsolo zokuthi kunezidulisa izimpahla ngokweqile. UNkk Dube-Ncube uthi akathokozile ngendlela okubiza ngayo ukudla eNdumeni.
Previous articlezehlile izibalo zobugebengu kuleli
Next articleKuboshwe 50 emshadweni